Umkhuleko wokuthola izinto ezilahlekile. ? Futhi Kwebiwe [San Antonio]
Umkhuleko wokuthola izinto ezilahlekile Kubaluleke kakhulu ngoba ezikhathini eziningi sizithola sisezimeni ezixakaniseka nezinto ezithile esilahlekelwe zona ezifana nokhiye bezindlu noma izinto ezibaluleke kakhulu njengemali.
Iqiniso ngukuthi ukuba nalo mkhuleko kungasisiza hhayi ukuthola lokho ebesilahlekile kepha nokugcina sizolile phakathi kwayo yonke inqubo yokusesha ngoba kungaba yisikhathi esishubile lapho ukubekezela nokuzola kuvame ukuncipha kepha Ngomkhuleko singalulama ukucabanga futhi senze ngempumelelo.
1 Umkhuleko wokuthola izinto ezilahlekile Uyini usanta?
2 1) Umkhuleko kuSan Antonio ulahlekelwe izinto
3 2) Umkhuleko wokuthola izinto ezilahlekile iSan Cucufato
4 3) Umkhuleko wokuthola izinto ezilahlekile noma ezebiwe
4.1 Ngingakhanyisa ikhandlela lapho ngithandaza?
4.2 Ngingawuqala nini umthandazo ukuthola izinto ezilahlekile?
Umkhuleko wokuthola izinto ezilahlekile Uyini usanta?
San Antonio Waziwa ngabaningi njengosanta wezinto ezilahlekile ngoba naye uqobo, ngesikhathi esaphila, wazibonela imicimbi ethile ebinzima kakhulu esandleni somuntu.
Impilo yalo saint iyisimangaliso kusuka ekuqaleni kuya ekugcineni futhi, ngakho konke lokhu, waba ngumsizi omkhulu wabantu ababhekene nezinkinga zokulahleka kwempahla ethile.
Omunye wemikhuleko engenziwa kulawa macala kuSan Cucufato njengoba lo wayengumsakazi wevangeli ezindaweni ezikude lapho cishe akekho owaba nesibindi sokuya khona.
Imikhuleko yaqala ukufakwa kuye ngoba, kanye neSan Antonio, waba ngumsizi onamandla futhi izimpendulo zakhe zinembile futhi zimile kangangokuba bayamangala.
1) Umkhuleko kuSan Antonio ulahlekelwe izinto
«USanta Anthony, inceku kaNkulunkulu ekhazimulayo, odume ngokufaneleka kwakho nezimangaliso zakho ezinamandla, sisize ekutholeni izinto ezilahlekile; sinikeze usizo lwakho esivivinyweni, futhi ukhanyisele izingqondo zethu ekufuneni intando kaNkulunkulu.
Sisize ukuthi siphinde sithole impilo yomusa isono sethu esayichitha, futhi usiholele ekuphathisweni kwenkazimulo esayithenjiswa nguMsindisi.
Sicela lokhu kuKristu iNkosi yethu.
Lomkhuleko ungenziwa nganoma yisiphi isikhathi noma isimo ngoba iSan Antonio ihlala ilalela izicelo zabantu bayo futhi uma icela isimangaliso esithile impendulo iza ngokushesha okukhulu.
Khumbula ukuthi imikhuleko inamandla nokuthi iba isikhali esiyimfihlo esingasisebenzisa noma nini lapho sidinga ngoba ukuphela kwesidingo ukuthi sibe nokholo.
2) Umkhuleko wokuthola izinto ezilahlekile iSan Cucufato
“Ngilahlekile (asho elahlekile), Ngifuna ukuyivusa, futhi uma ngingafi ngaphambili futhi ngaleli findo ngenza amabhola akho ato, San Cucufato, futhi iboshwe ishiywe, kuze kube (usho elahlekile) ezandleni zami ngiyabuya. Ameni ”
ISan Cucufato ngomunye wabangcwele abanamandla kakhulu esingaphendukela kubo ezikhathini zokuphelelwa yithemba nosizi lwangempela lapho singatholi izinto zethu.
Akunandaba ukuthi kunzima kangakanani esikucelayo, le yimithandazo enamandla engenziwa nganoma yisiphi isikhathi.
3) Umkhuleko wokuthola izinto ezilahlekile noma ezebiwe
«O Nkulunkulu Ongunaphakade noBaba Onamandla, Nkosi yeZulu nomhlaba, othi ngoJesu Kristu, iNdodana yakho, uzibonakalise kwabampofu, abangavamile nabathobekile, siyabonga ngoba ugcwalise iSanta Aparicio ebusisiwe ngothando lwakho, ukuze uphile ngokulula kwenhliziyo efisa izimpahla zaseZulwini.
Siphe ukuthi, ngokucela kwakho, sizuze lokho esikucelayo, ukuthi isandla sakho esinamandla sizosinikeza masinyane lokho esilahlekile noma okususiwe kithi:
(phinda lokho ofuna ukululama)
Baba siyakudumisa futhi sikubusise futhi siyabonga ngoba siyazi ukuthi uyasilalela nokuthi isihawu sakho asipheli, siyakuncenga ukuthi ubhekane nezicelo zethu futhi usisize kulabo abaceliwe, ukuze, lapho siduduzeka ekuhluphekeni kwethu, sizocabanga ngemangaliso yamandla akho.
Siyanicela futhi ukuthi nikhulise ukukholwa nokupha kwethu ukuze, silandele isibonelo somkhuleko nokuzinikela kwe-Holy Aparicio ebusisiwe, sizokudumisa njalo.
NgoJesu Kristu iNkosi yethu. Amen. "
Lo mkhuleko wokuthola izinto ezilahlekile noma ezebiwe unamandla amakhulu.
Izwi likaNkulunkulu lisifundisa ukuthi sithandaze kanjani, emavesini akhe sibona izibonelo ezingenakubalwa zokholo lapho, ngomthandazo owodwa nje, izimangaliso ezimangalisayo zatholakala.
Kungakho kungafanele siwuchithe umkhuleko ngoba unamandla amakhulu. Ukuphela kwento eceliwe ngomkhuleko ukuze uthole impendulo eceliwe ukukwenza ngokukholwa, sikholwa ukuthi lokho esikucelayo kuzokwamukelwa.
Kukhona labo abajwayele ukwenza izinhloso zokuthandaza izinsuku eziningana noma ihora elithile, kepha iqiniso ukuthi lokhu kuncike kulokho ngamunye akuhlelile enhliziyweni yakhe, ngoba leyo yinto ebaluleke kakhulu.
Ngingakhanyisa ikhandlela lapho ngithandaza?
Udaba lwamakhandlela lubaluleke kakhulu kanti impendulo yalo mbuzo ngu-yebo omkhulu.
Amakhandlela kuphela awanamandla kepha asiza ukwenza yonke imvelo ibe ngcono futhi ithathwe njengeminikelo yabangcwele bethu ngoba ukuyisebenzisa kudinga ukutshalwa kwezimali okuthi, yize kukuncane, kubhekwe njengesenzo Ukukholwa nokuzinikela
Ngingawuqala nini umthandazo ukuthola izinto ezilahlekile?
Imikhuleko kufanele yenziwe nganoma isiphi isikhathi sosuku nalapho idingeka khona.
Asikho isikhathi esinqunyiwe Lokho kulungile, noma kunjalo, kukhona abaningi abathi umthandazo wasekuseni onamandla unamandla.
Ukwazi ukuthandaza nomaphi lapho umthandazo wenza khona isikhali sethu esihle kunazo zonke, singaba semotweni, emsebenzini, endlini yethu noma komunye umhlangano futhi sithandaze ngengqondo nenhliziyo futhi nokuthi umthandazo wokuthola izinto ezilahlekile unamandla nje njengalokho okwenziwa esontweni.
Umkhuleko onamandla wokuheha owesilisa
Umkhuleko onamandla wokuphupha nami